हाम्राे घर आंगनमै पाइने घ्यूकुमारीकाे अचुक औषधी यस्ताे, पुरा पढ्नुहोस् – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Health/हाम्राे घर आंगनमै पाइने घ्यूकुमारीकाे अचुक औषधी यस्ताे, पुरा पढ्नुहोस्
हाम्राे घर आंगनमै पाइने घ्यूकुमारीकाे अचुक औषधी यस्ताे, पुरा पढ्नुहोस्
2886minutes read
घिउ कुमारी सर्व गुणकारी मानवहीतमा प्रकृतिले दिएको बरदान यसलाई आयुर्वेदमा संजिवनी मानिन्छ । छालाको सुरक्षादेखि कपालको सौन्दर्यता र घाउँ भर्ने समेतको कार्य यसबाट हुने गर्दछ ।
एलोवेराको जुस नियमित पिउने व्यक्ति कहिल्यै विमार रहन्न । जोड्नी दुखेमा रक्तसंचारको रुपमा एलोवेरालाई बेजोड् मानिन्छ । एलोवेराले कपाल चुडिनबाट जोगाउँने तथा कपाललाई सेतो हुनबाट रोक्ने गर्दछ । दैनिकरुपमा सुत्नुभन्दा अगाडी गोडामा लगाएमा गोडा फुट्नबाट बचाउँछ । यस्ले छालाको नरमपनलाई कायम राख्दछ ।
१. आँखाको रोगमा
आँखाको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ ।
२. कानको रोगमा
कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २\_३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमा हाल्ने र दुबै दुखेमा दुबैमा हाल्नाले ठीक हुन्छ ।
३. मस्तिष्कको रोगमा
मस्तिष्कको रोगमा नित्य १ चम्चा घ्यू कुमारी खाने र तालुमा लगाउने गरेमा टाउको पोल्ने, पित्त विकार आदि ठिक हुन्छ र मस्तिष्क ठण्डा हुन्छ ।
४. पुरानो ज्वरोमा
पुरानो ज्वरोमा घ्यू कुमारीको जरा १ चम्चा तातो पानीसँग खानाले जीर्ण ज्वरो पनि निको भएर आउँछ । यसो गर्दा वमन भएमा डराउनु पर्दैन पित्त निस्केर जान्छ ।
५. जण्डीस, कमलपित्त भएमा
जण्डीस, कमलपित्त भएमा बिहान बेलुका १\_१ चम्चा घ्यू कुमारी सेवन गर्ने गरेमा आँखा, शरीर पहेलो भएको हट्दै जान्छ र निको हुन्छ ।
खटिरामा घ्यू कुमारीको गुदी तताएर खटिरामा बाँधेमा घाउ छिट्टै पाक्छ र निको हुन्छ ।
७. वायुगोला\_गानो गएमा
वायुगोला\_गानो गएमाः १ चम्चा घ्यू कुमारीको गुदी, १चम्चा राम्रो बेसार १ चिम्टी सिदेनून फिटेर तातो पानीसँग खाली पेट केही दिन खाएमा ठीक हुन्छ ।
८. चिनी रोग (डाइबेटिज) मा
चिनी रोग (डाइबेटिज) मा १ चम्चा घ्यू कुमारीको गुदीमा १ चम्चा गुर्जोको सत्व (चिनी) फिटेर खाने गरेमा रोग निको हुँदै जान्छ ।
९. यौवनवान बनिरहन
यौवनवान बनिरहन २ चम्चा घ्यू कुमारीको गुदी बिहान\_बेलुका खाने गर्नाले कुनै रागले छुदैन, दाँत बलियो हुन्छ, स्वर सुरिलो हुन्छ, कपाल कालो हुन्छ, शरीरमा सँधै बल प्रदान गरिरहन्छ ।
१०. कुनै पनि विषमा
कुनै पनि विषमा घ्यू कुमारीको रस वा गुदी नित्य सेवन गर्नाले सम्पूर्ण शरिरको विष नाश हुन्छ, बल तागत प्रदान गर्छ । यसलाई मालिसको रुपमा शरिरमा लगाउनाले पनि प्रशस्त फाईदा हुन्छन् ।
११. टाउको दुखेमा
१२. पेटमा गाँठो देखिएमा
पेटमा गाँठो देखिएमा घ्यू कुमारी तताएर पेटमा गाँठो भएको ठाँउमा बाँध्नाले गाँठो ठीक हुँदै जानेछ ।
१३. बच्चालाई कब्जिएत भएमा
बच्चालाई कब्जिएत भएमा घ्यू कुमारीको लेदो र साबुनको गाज फिटेर नाइटोमा वरिपरि लगाउनाले दिसा लागेको निको हुन्छ ।
१४. वाथ भएमा
वाथ भएमा घ्यू कुमारीको गुदी नित्य बिहान/बेलुका एक/एक चम्चा खाने गरेमा वाथरोग ठीक हुन्छ । घ्यू कुमारीको गुदी नित्य बिहान/बेलुका एक/एक चम्चा खाने गरेमा वाथरोग ठीक हुन्छ ।
१५. मर्केको, चोट लागेको र सुनिएकोमा
मर्केको, चोट लागेको र सुनिएकोमा घ्यू कुमारीको गुदीमा बेसार मिसाउने र तताएर बाँधिदिएमा छिटै दुख्न कम हुन्छ, चोट पनि ठिक हुन्छ ।
१६. दाद आएमा
दाद आएमा घ्यू कुमारी, लसुनमा पिनेर लेप लगाउने गरेमा दाद आएको ठिक हुन्छ ।
कसरी बनाउन सकिन्छ घ्यूकुमारीको फेस प्याक ? जान्नुहोस
मह – घ्यूकुमारी प्याक
ताजा घ्यूकुमारीको पातलाई राम्ररी धोएर पानीमा उमाल्नुस् र यसलाई लेदो (पेस्ट) बनाउनुस् । यसमा थोरै मह हालेर प्याक बनाउनुस् । त्यो प्याकलाई अनुहार र घाँटीमा लगाएर २० देखि २५ मिनेटसम्म छाडिदिनुस् । त्यसपछि धुन सकिन्छ । यस्तो फेस प्याक हप्तामा दुईपटक लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
केरा – घ्यूकुमारी प्याक
एउटा पाकेको केरालाई राम्रोसँग मिच्नुस् । यसमा दुई ठूलो चम्चा घ्युकुमारीको जेल र दुई ठूलो चम्चा मह हाल्नुस् । यो तीन चिजलाई राम्ररी मिलाएर अनुहारमा घुमाई–घुमाई मसाज गर्नुस् र केही समयका लागि छाडिदिनुस् । त्यसपछि मनतातो पानीले धुनुस् । यो प्याक संवेदनशील छालाका लागि बढी उपयोगी हुन्छ ।
मसला बदाम – घ्यूकुमारी प्याक
मसला बदामलाई राम्ररी पिँध्नुस् । यसमा दुई चम्चा घ्यूकुमारीको जेल हाल्नुस् । यसलाई राम्ररी मिलाएर अनुहार र घाँटीमा लगाउनुस् । करिब १५ मिनेटपछि राम्ररी धुनुहोस् । यो प्याक ढल्कँदो उमेर भएका र सुक्खा छाला भएकालाई उपयोगी हुन्छ ।
काँक्रो – घ्यूकुमारी प्याक
घ्यूकुमारीलाई राम्ररी सफा गरेर यसको जेल निकाल्नुहोस् । एउटा काँक्रो कोरेसोमा कोरेर त्यसको रस निकाल्नुस् । त्यो रसलाई जेलमा मिसाउनुस् । त्यसमा अलिकति गुलाबजल पनि हाल्नुस् । अब प्याक तयार भयो । यसलाई अनुहार तथा घाँटीमा लगाएर २० मिनेट छाडिदिनुस् । त्यसपछि पानीले सफा गर्नुस् । यो प्याक संवेदनशील छाला हुनेलाई बढी उपयोगी हुन्छ ।
कागती – घ्यूकुमारी प्याक
अर्को एक प्रकारको उपयोगी प्याक घरमै बनाएर तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि घ्युकुमारीको जेल तथा कागती चाहिन्छ । घ्यूकुमारीको जेलमा कागतीको रस मिलाएर हरेक दिन अनुहार र घाँटीमा लगाउनुस् । बिस्तारै अनुहार चम्कन थाल्छ । यो हरेक प्रकारको छालाका लागि उपयोगी हुन्छ ।
बेसन – घ्यूकुमारी प्याक
एक कचौरा घ्यूकुमारीको जेल निकाल्नुस् । यसमा बेसन, दही, गुलाबजल र सुन्तलाको बोक्राको धुलो मिलाएर बाक्लो लेदो बनाउनुस् । यसलाई अनुहार र गर्दनमा हप्ताको दुईपटक लगाउनुस् ।
केही समयपछि तपाईंले फरक महसुस गर्नुहुन्छ । यो प्याक सामान्य छाला हुनेका लागि उपयोगी हुन्छ । घ्यूकुमारीको फाइदाहरु बयान गरेर साध्य छैन । आगामी पोस्टहरुमा यसको अरु फाइदाहरुबारेमा बिस्तृत जानकारी दिने छौ । पोस्ट मन परेमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला ।
याे जानकारी पनि अत्यन्तै महत्त्वपुर्ण छ ।
गर्मीमा र सामान्य मौसमा छालाको स्याहार गर्ने तरिका फरक हुन्छ, एउटै उपायले काम गर्दैन
विशेष गरी गर्मी मौसममा सूर्यको ताप तथा बाह्य तापक्रमका कारण शरीरमा पसिना आउँछ । पसिनाका कारण छाला भित्र र बाहिर प्रभाव पर्छ । जसका कारण घमौरा आउने, फंगल इन्फेक्सन हुने (छालामा घाउ हुने), दाद, दुबी आउने, छाला बाक्लो हुने र चिलाउने लगायतका रोगहरू लाग्छन् । शरीरमा सीधै सूर्यको प्रकाश परेमा छाला उमेरभन्दा पहिल्यै चाउरी पर्छ ।
गर्मी मौसम छालासम्बन्धी रोगका लागि पनि संवदेनशील मौसम मानिन्छ । यो मौसममा सूर्यको ताप चर्को हुने, वातवरणमा सुक्ष्म जीवाणु र किराफट्यांग्रासमेत यही मौसममा बढी सक्रिय हुन्छन् । यी वातवरणमा हाम्रो छालाको सम्पर्क हुन पुगेमा छालासम्बन्धि विभिन्न रोग लाग्ने छाला रोग विशेषज्ञ बताउँछन् ।
गर्मी मौसममै ठेउला तथा दादुरा आएमा पनि छालामा बिबिरा तथा फोका देखिन्छन् । खेतबारीमा काम गर्ने किसानलाई पनि विभिन्न भुसुना तथा किराले टोकेर छालामा संक्रमण हुन्छ । छालाका लागि संवेदनशील मौसम भएकाले कुनै पनि संक्रमण हुन सक्छ ।
शरीर स्वस्थ भए मात्र छाला पनि स्वस्थ हुने भएकाले यो मौसममा नियमिति व्यायाम र स्वस्थ भोजन गर्नुपर्ने महाराजगन्जस्थित टिचिङ हस्पिटलका छालारोग विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार दासले बताए ।
कुनै कारणले छालामा घाउ भइहालेमा चिकित्सकको सुझावमा मात्र औषधि प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । प्राकृतिक र कृत्रिम दुई विधि अपनाएर छालाको हेरचाह गर्न सकिन्छ ।
गर्मीमा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने
१. खेतबारीमा जानु अघि पूरा लुगा लगाउने
२. बाहिर निस्कँदा छाता ओढ्ने या क्याप लगाउने
३. कामबाट फर्केपछि राम्रोसँग शरीर सफा गरी ओभानो राख्ने
४. आफ्नो छालाअनुसार सनब्लक क्रिम मात्र प्रयोग गर्ने
५. सकेसम्म छहारीमा बस्ने, भित्र काम गर्ने
६. अनावश्यक रूपमा बाहिर घाममा नजाने
७. नियमित व्यायाम गर्ने
८. प्रशस्त पानी पिउने
९. सन्तुलित भोजन गर्ने
लामो समय छालाको स्याहार कसरी गर्ने ?
लामो समय छालाको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँनका लागि बेला बेला छालालाई विशेष हेरचाह गर्ने गर्नु पर्छ । यसका लागि तल बमोजिमका कामहरु गर्न सक्नु हुनेछ ।
चन्दनले छालामा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थलाई हटाउछ र छालालाई सफा, चम्किलो राख्छ । चन्दनलाई नरिवलको तेलमा मिसाई शरीर मसाज गर्नाले पूरै शरीरको छाला सफा हुन्छ र शरीरलाई आराम मिल्छ ।
गुलाबमा भिटामिन ‘सी’ प्रशस्त पाइन्छ । त्यसैले सुत्नुअघि अनुहारमा गुलाबजल दल्नाले डन्डीफोर, पोतोलगायत छालाका समस्या कम हुन्छन् र छाला चम्किलो बन्छ ।
घ्यूकुमारी छालामा लगाउनाले छाला तलको रगत शुद्ध हुनुका साथै डन्डीफोर, चिलाउने, छाला सुन्निने, छाला फुस्रो हुने आदि समस्या कम हुन्छ । घ्यूकुमारी लगाउनाले छालामा रहेका दाग पनी बिस्तारै हराउँदै जान्छ ।
छालामा रहेका टक्सिनलाई नीमले हटाउछ साथै डन्डीफोरलाई पनि हटाउँछ । यसका लागि नुहाउनुभन्दा आधा घण्टाअघि पानीमा नीम पत्ता हाल्नुपर्छ र त्यही पानीले नुहाउने गर्नुपर्छ ।
सुन्दर बन्न छालामा बेसार दल्ने चलन छ । बेसनमा बेसार र चन्दन मिसाएर छालामा लगाउनाले छाला सफा र चम्किलो बन्दै जान्छ । दूधमा एक चिम्टी बेसार मिसाएर दिनहुँ खाने गर्नाले छाला राम्रो हुँदै जान्छ ।
छालाका लागि पानीको आवश्यकता
पानी मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक छ । पानीविना शरीरका कुनै पनि अंग बाँच्न सक्दैन । स्वस्थ जीवनका लागि दैनिक पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन जरुरी हुन्छ ।
पानीले थुप्रै रोगबाट त बचाउँछ नै, छालाको समस्या पनि समाधान गर्छ । पानीले छालालाई चम्किलो राख्न मद्दत गर्छ । यसले अनुहारको चमक बढाउँछ । पानीको कमीले छाला ड्राई हुन्छ । त्यसैले सुक्खापन र चाउरीपनबाट बच्न पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पानीको कमीले छाला चिलाउने, रातो हुने, एलर्जीलगायतका समस्या आउँछ । यसका साथै बाहिरको धुवाँ, धुलोले छालासम्बन्धी अन्य रोग पनि निम्तिन सक्छ । यस्तो समस्याबाट बच्न पनि प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ ।
सुक्खा मौसममा बढी हावा चल्नुका साथै अत्यधिक धुवाँ–धुलो हुन्छ । जसले छालाको एलर्जी र डन्डिफोरको समस्या हुन्छ । प्रशस्त पानी पिउँदा यस्तो समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
पानीको कमीले कम उमेरमै बूढो देखाउँछ । त्यसैले, खाली पेटमा पानी पिउने बानीले छालासमेत सफा हुन्छ । जब शरीरमा अधिक विषाक्त पदार्थ हुन्छ तब छालामा विभिन्न खालका दाग र धब्बा देखिन थाल्छन् ।
त्यसैले पानी पिउँदा शरीरमा भएको विषाक्त पदार्थ राम्रोसँग शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । जसले गर्दा अनुहारमा धब्बा देखिने, आँखाको वरिपरि चाउरी पर्नेलगायतका समस्याबाट पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
तपाईं डाइटिङ गरिरहनुभएको छ भने खाली पेट पानी पिउन जरुरी छ । खाली पेटमा पानी पिउँदा २४ प्रतिशतले मेटाबोलिक रेट बढेर जान्छ । यसरी पिएको पानीले खानालाई राम्रोसँग पचाउन मद्दत गर्छ ।
जसले बिस्तारै तौल घटाउन पनि भूमिका खेल्छ । पानीमा क्यालोरी नहुने भएकाले यसले स्वास्थ्यमा कुनै असर पुर्याउँदैन । प्रत्येक दिन चारदेखि पाँच लिटर पानी पिउनुलाई स्वस्थकर मानिन्छ ।
तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
बियरले यति धेरै खत रनाक रोगबाट जोगाउछ, जन्नुहोस बियरका फाइदा !